Iron Man မငျးသမီး Gwyneth Paltrow အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ရပျဆိုငျးလိုကျပွီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Iron Man မငျးသမီး Gwyneth Paltrow အနုပညာလုပျငနျးတှကေို ရပျဆိုငျးလိုကျပွီလား ? ? ?
admin November 22, 2021	Entertainment Leaveacomment
အသကျ ၄၉ နှဈအရှယျ အျောစကာဆုရှငျ Gwyneth Paltrowက သူမရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကို လုပျကိုငျနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ သူမရဲ့အနုပညာအလုပျကို စှနျ့လှတျတော့မယျဆိုတဲ့ ကောလဟာလတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ထိုကောလဟာလတှနေဲ့ ပကျသကျပွီး Gwyneth မှ ပွတျပွတျသားသား ငွငျးဆိုလိုကျပွီး သူမရဲ့ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးဟာ သူမရဲ့အနုပညာပိုးကို မလှမျးမိုးနိုငျသေးပါဘူးဆိုပွီး ထုတျဖျောပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
Today Magazine မှ သတငျးတငျဆကျသူ Savannah Guthriethis က Gwyneth ကို အငျတာဗြူးလုပျရာမှာ Gwyneth က တဈရှိနျထိုးအောငျမွငျနတေဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာအလုပျနဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးအကွောငျးကို ပရိသတျတှကေို အသိပေးမြှဝခေဲ့ပါတယျ။ Paltrow က “ကြှနျမက အနုပညာအလုပျတှလေညျး ဘယျတော့မှ ရပျတနျ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျမရဲ့ Goop ကုမ်ပဏီအတှကျကတြော့ ကြှနျမက ဒီကုမ်ပဏီကိုတညျထောငျသူရော၊ ကုမ်ပဏီရဲ့CEO လညျးဖွဈတာကွောငျ့ ဒီအလုပျကိုတော့ ကြှနျမနတေို့ငျးလုပျနရေမှာပါပဲ။ အခုလညျး ကြှနျမရဲ့ကုမ်ပဏီက ပုံမှနျလညျပတျနိုငျပွီဖွဈတာမို့ ကြှနျမအလုပျကို အခြိနျပေးနိုငျသလို ကြှနျမရဲ့ကလေးတှကေိုလညျး အခြိနျပေးနိုငျလာပါပွီ။ အခုခြိနျမှာတော့ ကြှနျမရဲ့အနုပညာအလုပျကို အခြိနျပွညျ့လုပျနိုငျဦးမယျမထငျဘူး” လို့ ဆိုပါတယျ။
သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးအပွငျ အနုပညာအလုပျတှကေိုပါ ပူးတှဲလုပျကိုငျနတေဲ့ မငျးသမီး Paltrow ဟာ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကို အခြိနျပိုပေးနိုငျဖို့အတှကျ အနုပညာအလုပျတှကေို ခဏ အနားပေးထားရခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။
Iron Man မင်းသမီး Gwyneth Paltrow အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလား ? ? ?
အသက် ၄၉ နှစ်အရွယ် အော်စကာဆုရှင် Gwyneth Paltrowက သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်ကို စွန့်လွတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုကောလဟာလတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး Gwyneth မှ ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုလိုက်ပြီး သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဟာ သူမရဲ့အနုပညာပိုးကို မလွှမ်းမိုးနိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Today Magazine မှ သတင်းတင်ဆက်သူ Savannah Guthriethis က Gwyneth ကို အင်တာဗျူးလုပ်ရာမှာ Gwyneth က တစ်ရှိန်ထိုးအောင်မြင်နေတဲ့ သူမရဲ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Paltrow က “ကျွန်မက အနုပညာအလုပ်တွေလည်း ဘယ်တော့မှ ရပ်တန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ Goop ကုမ္ပဏီအတွက်ကျတော့ ကျွန်မက ဒီကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်သူရော၊ ကုမ္ပဏီရဲ့CEO လည်းဖြစ်တာကြောင့် ဒီအလုပ်ကိုတော့ ကျွန်မနေ့တိုင်းလုပ်နေရမှာပါပဲ။ အခုလည်း ကျွန်မရဲ့ကုမ္ပဏီက ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ပြီဖြစ်တာမို့ ကျွန်မအလုပ်ကို အချိန်ပေးနိုင်သလို ကျွန်မရဲ့ကလေးတွေကိုလည်း အချိန်ပေးနိုင်လာပါပြီ။ အခုချိန်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့အနုပညာအလုပ်ကို အချိန်ပြည့်လုပ်နိုင်ဦးမယ်မထင်ဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအပြင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ မင်းသမီး Paltrow ဟာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို အချိန်ပိုပေးနိုင်ဖို့အတွက် အနုပညာအလုပ်တွေကို ခဏ အနားပေးထားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous သမီးမိနျးကလေး အမွဲလိုခငျြခဲ့တဲ့ မငျးသမီးဒိုငျယာနာ။
Next ဟကျချကာမြားကို ဒျေါလာသနျး (၄၀) ပေးလြျောခဲ့ရသညျ့ Insurance ကုမ်ပဏီကွီးတဈခု။